Nidaamka deegaanka ee suuq geynta nolosha | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 8, 2012 Arbacada, Oktoobar 10, 2012 Jenn Lisak Golding
Feejignaanta suuq geynta nolosha waa mid muhiim u ah suuqa maanta, taas oo ah sababta aan ugu faraxsanahay inaan la shaqeeyo macmiilkeyga, Xaqa Isdhaxgalka, qaabeynta iyo abuurista macluumaad ku saabsan mowduucan. Infographic wuxuu daboolayaa wax kasta oo ka yimaada jiilka hogaaminta illaa suuq-geynta suuq-geynta illaa beddelaadda, iyo sidoo kale wax ka qabashada caqabadaha iyo mustaqbalka meeshan.
Maaddaama otomatiga suuqgeynta uu ka yar yahay 10 sano, weli waxaan wax ka baranaynaa warshadaha iyo sida loogu isticmaali karo in lagu gaaro himilooyinka suuqgeynta. Infografigani wuxuu xooga saarayaa xaqiiqda ah inaan la kulanay koritaan deg deg ah arimahan, waxaana ubaahanahay inaan helno hanaan loo maro si loo gaaro rajada iyo macaamiisha iyadoo la adeegsanayo dhibco taabasho badan Laakiin sidoo kale waxay caddaynaysaa in arrimuhu si dhakhso ah isu beddelayaan.
Sideed u maleyneysaa in suuqgeynta otomaatiga iyo suuqgeynta nolosha ay isbadali doonaan sanadka soo socda? 5ta sano ee soo socota?
Martech Featured ee bizMarketing Magazine
Oktoobar 8, 2012 at 12:51 PM
Waad ku mahadsan tahay wadaagista, ragga! Farxad ayey ii ahayd inaan dhammaantiin idinla shaqeeyo si wadajir ah aad u soo qaadataan sawir-gacmeedkan. Waxaan u maleynayaa in baaritaankayaga muuqaalkaan uu ahaa mid si aan caadi aheyn u muujiyay. Booska tikniyoolajiyadda suuqgeynta ayaa ku socota xawli aad u layaab badan - Waxaan dhihi karaa waayo aragnimadayda hore in xalalka otomaatiga suuq geynta oo ay weheliso istiraatiijiyad suuq geyn cusub ay yihiin baahiyaha cusub ee urur. Waxaan kaliya ka akhriyay subaxnimadan blog-ka Go'aannada Sirius in tirada shirkadaha B2B ee adeegsanaya otomaatigga suuqgeynta ay si dhakhso leh u korayaan, iyaga oo qiyaasaya in tiradu ay kor u kici doonto 50% sanadka 2015. Ka hadal koritaanka jibbaarada.
Kuwa idinka mid ah ee halkaa jooga oo ka fekeraya hirgelinta xalka markii ugu horeysay, waa tan taladayda ugu muhiimsan: hubi inaad yeelato lamaane adag oo leh heer adeegyo raaxo leh oo heshiiska lagu daray. Ku guuleysiga isticmaalka xalka otomatiga suuq geynta ayaa gabi ahaanba ku tiirsan hirgelinta iyo ka faa'iideysiga saxda ah - waana wax aad u fudud markii ugu horeysay.